Nhau - China yekutanga daro refu-refu "rimwe-gomba, kaviri-kudhonza" kunongedzera kudhiraira kwakabudirira kupfuura
China yekutanga-daro refu "rimwe-gomba, kaviri-kudhonza" kunongedzera kuchera kwakabudirira kupfuura
China yekutanga daro refu-refu "rimwe-gomba, kaviri-kudhonza" kunongedzera kuchera kwakabudirira kupfuura
Musi waAugust 11, munyori akadzidza kubva kuLiaohe Oiri Kuvaka Kambani Yekutanga Inoyambuka Injiniya Kambani kuti iyo Qinghe inotungamira yekuchera kuyambuka kwechishanu bhidha yeDaqing-Jinxi mafuta asina kucherwa pombi chirongwa (Chuiyang-Tieling chikamu) chakaitwa nekambani iyi chakabudirira, kuita yekutanga-refu kukura muChina. Inotungamira yekuboora inofamba ichibva kune "rimwe-gomba mbiri-dhonza".
Iyo Qinghe yekuyambuka chirongwa inowanikwa anenge 2 makiromita kuchamhembe kweAnyemin Village, Yemin Town, Kaiyuan City, Liaoning Province. Iri ibasa rekuvaka rekudonha panguva imwe chete kuburikidza nepombi yemafuta ine dhayamita ye813 mm uye yekumeso tambo casing ine dhayamita ye114.3 mm.Maumbirwo eiyo geological enzvimbo yekuvaka anotongwa nematombo nematombo. Chikamu chedivi rekuchera kuyambuka chakareba 1625 metres uye ndecherongwa hukuru hwekuyambuka rwizi.
Kuti upedze basa rekuyambuka rwizi panguva yakatarwa, kuvakwa kweDajin Pipeline Project Dhipatimendi reNo.1 Kuvaka kweRwizi rweLiaohe kwakarongedzwa nesainzi kumira tembiricha yakakwira uye kupisa. Iine zvakawanda zvakaoma senge yakakwira kukweshera, isina kuenzana yakapfava uye yakaoma strata, uye yakabudirira kupedzisa iyo yekukweva basa. Pakange pasina chekumhanyisa madhaka zvinoitika pamutsetse, izvo zvairumbidzwa zvikuru nevaridzi, manejimendi uye nehurumende yemuno.